Insizakalo | I-Xuzhou Sunbright Electronic Technology Co., Ltd.
I-XuZhou Sunbright iqinisekisa imishini emisha ngaphandle kwezesekeli ukuthi ikhululeke ekulimaleni ekusebenzeni nasezintweni ezisetshenziswayo isikhathi esiyizinyanga eziyishumi nesishiyagalombili (izinyanga eziyisithupha zezingxenye ezingasebenzi) kusukela ngosuku lokuthunyelwa kusetshenziswa ngokujwayelekile nenkonzo. Isibopho senkampani yethu ngaphansi kwalesi siqinisekiso sikhawulelwe ekulungiseni, kwinketho yenkampani yethu, noma iyiphi ingxenye lapho ukuhlolwa kwenkampani yethu kufakazela ukuthi kunephutha.
Inqubo Yesimangalo Sesevisi
Xhumana noMnyango Wezinsizakalo ngeFomu Lokumangalelwa Kwesevisi ngemininingwane eningiliziwe yenkinga. Sicela unikele ngenombolo yemodeli, inombolo ye-serial, nencazelo emfushane yesizathu sokubuya, isithombe esicacile sokubonisa inkinga singubufakazi obungcono.
I-XuZhou Sunbright inikeza ukuqeqeshwa kwamahhala kwezobuchwepheshe nezinsizakalo kubasebenzi bezobuchwepheshe nokuthengisa babathengisi bemikhiqizo ehlobene nayo futhi izoqhubeka nokuhlinzeka ngosizo lobuchwepheshe nge-imeyili, i-Skype njengoba kucelwe ngabasabalalisi. Ukuqeqeshwa kuzokwenziwa eShanghai China. Izindleko zokuhamba nezokuhlala zikwi-akhawunti yabasabalalisi.
Phakathi nesikhathi sewaranti: Abasabalalisi / ikhasimende libhekele ukuthuthwa kwempahla ethunyelwa eXuzhou Sunbright ukuze ilungiswe. I-Xuzhou Sunbright ibhekele ukuthuthwa kwempahla esuka eXuzhou Sunbright iye kumsabalalisi / kumakhasimende. Ngemuva kwesikhathi sewaranti: Ikhasimende lenza noma yiziphi izimpahla zedivayisi ebuyisiwe.
Uma kwenzeka kuba nesidingo sokubuyisela ingxenye enkampanini yethu, inqubo elandelayo kufanele ilandelwe: Ngaphambi kokuthunyelwa kwempahla, thola ifomu le-RMA (Return Materials Authorisation). Inombolo ye-RMA, incazelo yezingxenye ezibuyayo, nemiyalo yokuhambisa ifakiwe kufomu le-RMA. Inombolo ye-RMA kufanele ivele ngaphandle kwephakeji yokuthumela. Ukuthunyelwa kokubuyisa ngeke kwamukelwe uma inombolo ye-RMA ingabonakali kahle.
Uma unemibuzo mayelana nokugcinwa, imininingwane yezobuchwepheshe noma ukungasebenzi kahle kwamadivayisi, ungangabazi ukuxhumana nathi ngokushesha.